September 27, 2020 Xuseen 3
Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabey hadal xalay ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa in midnimada soomaaliya ay tahay muqadas, balse Somalailand muddo 30 sano ah aqoonsi raadinayaan welina helin.
Muuse Biixi Cabdi oo tababar ku soo xiray magaalada Hargaysa ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uusan ka hadli Karin midnimada Soomaaliya, isla markaana isaga uu yahay qofka wax ka socon la’yihiin.
“Shantii Soomaaliyeed inay midoobaan reer Somaliland kow bay ka yihiin, laakiin Caqliga siyaasiyiinta Xamar jooga iyo 5 madaxeyne ma yahay kii Soomaali isu keeni lahaa?… Farmaajo waxa aan leeyahay ha tilmaamin midnimo waadigii taababka u jaraye”.
Een muse biixi wuxu u hadlaya sidii loohadli jiray 60 kii. Marka waxan dhihi laha sida 2020 qof nool u hadal. oo iska daa wixii tagay.dad waa hore dhintay hadaba jogine oo alahii aburay la xisaab tamayo. Ee dad ka maanta nool wax la qaybso. Xamar intaa tagti shah kasoo cab geed ha isku xirine. Jaaw
Madaxweyne Almujaahid muuse biixi waxa soo doortay shacab one man one vote ayuu ku yimi.Maaha inuu la tirsado Armaajo oo suuliga uu ku xaaro Adoon xuni u furo iyo weliba godka lagu hor ilaaliyo.
Armaajo waxba maaha wuxuu la siman yahay Guulwadaaysha Pudhlijn, Galmudug iyo qashinka kale ee isbarbar yaaca oo aduunyadu ku manadsato.
Waxaan madaxweyne muuse kula talinayaa inaan hoos isu dhigin lana tirsan Armaajo, waayo maaha nin Dal iyo dad gacanta ugu jirto.
Meeshan Zooomalia waa iska musqul oo kale cidwalba kusoo kaadido. Waa dhul hada la heley oo kale dadka kunoolina yihiin Ugaadh.kuwa isku sheegaana waa wada tuug daalimiin ah oo diin iyo dhaqan toona xeerin ee ah maxaan cunaa.
Dadka shaxda siyaasadda udhuundaloola un baa garanaya ee, Farmaajo axsaan weyn ayuu u beesha Dhulbahante ugu sameeyay su’aashaas uu hawada iskaga laalay, aniga xaggayga na aad ayuu ugu saxsanyahay mowqifkaas uu iska taagay sababta oo ah af jooga loo ma adeego.
Xaqiiqadu waxay tahay in uu Farmaajo kubbadda lagu dheelayay talada masiiriga ee beeshan iyada muskeeda dib ugu laaday oo waa sidii loo baahnaa. Beeshu ma aha carruur aanu caqligoodu isku filnayn. Ma aha beel dhimirka ka wada xanuunsan oo aan go’aan qaadan karin. Ma aha haweeney dumaalkeeda la isku haysto. Waa beel dhan oo garaaddo, issimo, cuqqaal, iyo waxgarad leh. In markaasi taladeeda masiiriga ah shakhsi waddan hoggaan guud u ah iyo madaxtooyo uu dalku u simanyahay looga fadhiyo ayaa ah waalli iyo wax aad loo la fajaco xaqiiqatan.
Dhulbahantuhu masiibada ku habsatay ee khilaafka dhexdeeda ah waxaa ka sii daran in ay tolweynihii u soo gurmaday in ay ka dhexdhexaadiyaan oo soo afjaraan ka dhega’adaygeen oo kuna gacansayriyeen. Weliba, waxaa ay Puntland dhexdhexaadintaas u soo igmatay oo u xilsaartay tolka Ogaadeen iyo Geri oo laga aaminsanaa in ay Dhulbahantuhu aad ugu kalsoonyihiin maadaama ay Hartiga kale ku sannifeen. Waa la ogaa dadaalkii hagarla’aanta ahaa iyo muddadii dheerayd ee ay ergadii tolkaas ka socday ku qaadatay in ay beesha isku maslaxdo waagii shaqaaqooyinkii Cumar Maxamuudka, Bah Ararsamaha, iyo Cabdi Garaadka loo soo gurmaday oo la xallinnayay.
Haddaba, inta ay beeshu dhexdeeda sidaas ba’an u kala qaybsantahay way adagtay in ay talada masiiriga ah wax itifaaq ah ka gaarto mustaqbalka dhow. Waana qeyrmasuulnimo in ay beel iyadu iskasoo taagtay in ay heshiiso ama ay tolweynahoodu heshiisiiyaan caasimadda qaranka iyo madaxweyne qaran uga fadhido in ay taladeeda go’aamiyaan. Farmaajo axsaan ayuu u galay oo maanta taladii beesha dhabta u saaray, sida ay ka yeeli lahayd ba.
Beesha go’aan cad oo degdeg ah ayaa hadda ku laazima maadaama xilli kalaguur ah la soo galay. Dalka doorasho ayaa ka dhacaysa, mid dadban iyo mid kaleba. In ay dhan uun beeshu u dhacdo ayay tahay talada iminka ku caddaatay, wax u dhexeeyana heli mayso in ay ama Woqooyi Galbeed ku darsanto ama ay Woqooyi Bari oo ay Dowlad Midaleedka wax kala dhisatay toos u iimaansato. Farmaajo eed ma leh oo loo ma adeegsan karo maraanmarsiiyo ay beeshu guuldarrooyinkeeda ku dadato.
RAGANIMO RAKAY KU JIRTAA.